संशोधन प्रस्ताव पेस भएसँगै सांसद खरिद बिक्रीको खतरा !::Online News Portal from State No. 4
संशोधन प्रस्ताव पेस भएसँगै सांसद खरिद बिक्रीको खतरा !
काठमाडौं, २५ पुस – सरकारले संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा आइतबार टेबुल गरेलगत्तै विधेयक पारित गराउने अंकगणीय खेल सुरु भएको छ ।
विधेयक पारित गराउन सत्तारुढ दल राप्रपा र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको मत निर्णायक हुन्छ । तर दुबै दलले संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन हुनु पर्ने बताइरहेका छन् । संसदमा राप्रपाको ३७ र फोरम लोकतान्त्रिकका १४ सांसद छन् । नेपाल समाचारपत्र